Ciidanka nabad-sugidda maamulka Galmudug oo kala eryay xildhibaano isku ballansaday Hoteel Central – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda maamulka Galmudug oo kala eryay xildhibaano isku ballansaday Hoteel Central
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidanka nabad-sugidda ee maamulka Galmudug ay kala eryeen dhowr xildhibaan oo ku sugnaa Hoteel ku yaala magaaladaas.
Dad goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u xaqiijiyay in ciidamo badan oo ka tirsan kuwa nabad-sugidda maamulka Galmudug ay halmar isku gadaameen Hoteelka Central ee magaalada Cadaado.
Hoteelkaasi ayaa la sheegayaa inay maanta isku ballansadeen dhowr xildhibaan oo ka mid ah kuwii dhawaan xilka ka qaaday madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Amarkaasi ayaa la sheegayaa inuu bixiyay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, waxaana la sheegayaa in ciidamada nabad-sugidda ay weli ku sugan yihiin Hoteelka Central ee magaalada Cadaado.
Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug ayaa inoo xaqiijiyay in xildhibaanada halkaasi isku ballansaday uu qorshahooda ahaa inay magaalada Cadaado ka kiciyaan qalalaaso, xilli madaxweynaha maamulkaasi C/kariin Xuseen Guuleed uu xaalad deg deg ah kusoo rogay deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo.
Ilaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, waxaana xildhibaanada kulanka ku yeelan lahaa Hoteel Central ee magaalada Cadaado gebi ahaan lagu wargeliyay inaysan wax kulan ah halkaasi ku yeelan karin.